Vanhukadzi vakaenda nemibairo yekuchena | Kwayedza
Vanhukadzi vakaenda nemibairo yekuchena
18 May, 2018 - 00:05	 2018-05-17T20:51:15+00:00 2018-05-18T00:03:33+00:00 0 Views
AKANGA ari makuwerere neMugovera wadarika paimwe hotera iri muHarare apo vanhukadzi vakakunda mumakwikwi eKwayedza African Woman of the Year vakadzokera kudzimba dzavo nemibairo inosanganisira zvitofu nemachira ekusona mbatya.
Mubairo mukuru wakatorwa naBarbra Kamoto wemuHarare, uyo akahwinha 4-plate gas stove netangi regasi rinorema 3kg. Nelia Harapela wekuMarondera ndiye akatora mubairo wechipiri uye wechitatu wakaenda naTeckla Nyabezi wekuHauna.
Vamwewo vakapinda mumakwikwi aya vakawaniswa mibairo ndevanoti Korotilda Manyuchi (Harare), Chipo Mutyoramwendo (Harare), Granny Zhantali (Marondera), Media Kadenhe (Karoi), Judith Mharakurwa (Dorowa), Pegness Zvikonyaukwa (Kariba), Mercury Chanetsa (Zvishavane), Pauline Chimwayi (Gweru) naFaith Ned Tsongora wekuKaroi.
Vachitaura pachiitiko ichi, Muzvare Rose Vambe, avo vanove mukuru weAshava Designs iri mumugwagwa waSpeke Avenue, muHarare – avo vaive muenzi anoremekedzwa pazuva iri – vanorumbidza bepanhau reKwayedza nekusimudzira kwariri kuita mutauro weShona nekupfeka kunopa mutsigo.
“Zvinoyevedza kuti unzi mudzimai ane chiremerera nekuti zvinotangira pamapfekero ako semunhukadzi. Zvipfeko zveAfrican Attire zvinokwana pazviitiko zvose kungava kurufu, kumabiko, kumapira kana kusvondo saka haunetseki nekufunga kuti zvino ndopfekei.
“Madzimai ngatizivei nzvimbo dzekupfekera mbatya dzedu nekuti dzimwe dzacho dzakaita semidhebhe yakati kwati-kwati nemuviri dzinoita kuti vana vedu vatinyare,” vanodaro.
Muzvare Vambe vanokurudzira vanhukadzi kuti vatungamirire muzvirongwa zvinovapa chouviri zvakadai sekusona mbatya kuti vange vachibudirira muupenyu hwavo.
“Musatye, musazeze uye pindai mazviri munoona muchibudirira. Vamwe vanotadziswa kubudirira nekuringa zveshure, ndinoti imi musaite izvozvo,” vanodaro Muzvare Vambe.
Mudzimai ane mukurumbira mune zvemucheno uyu akazopa mumwe nemumwe wevanhukadzi gumi nevaviri vakapinda mumakwikwi aya mukana wekusarudza machira avanoda kusonerwa hembe kubva muchitoro chake cheAshava.
Achitaurawo pagungano iri, mupepeti weKwayedza, Patrick Shamba, anotenda vanhukadzi nekutsigira kwavari kuita bepanhau rine mukurumbira iri kuburikidza nekupinda mumakwikwi aya.
“Tinofara zvikuru nehukama hwamuri kuramba muchiumba neKwayedza nekuti isu tiri hove, tinoraramiswa nemvura inova imi vatsigiri vedu.
Ticharamba tichivandudza mibairo yedu kuti inge ichikugutsai,” anodaro Shamba.
VaMunyaradzi Hatendi, vanova Sales and Advertising Manager kuZimpapers — iyo inodhinda Kwayedza — vanotendawo vanhukadzi nerutsigiro rwavanopa kubepanhau iri.